FAALLO:-Maxaa Laga Filan Karaa Geeddi-Socodka DFS, Kadib Khilaafyadii Siyaasadeed Ee Ragaadiyey ?
Monday December 31, 2018 - 22:19:27 in Wararka by Mogadishu Times
Sannadka saacadaha kooban ka harsan yihiin waxaa lagu xusuusan doonaa Galaangalkii DFS, Siyaasadaha Is-diidan, Khilaafka Golayaasha Qaranka iyo kuwa ay DFS iyo DG ku kala irdhoobeen. Qiimeyn kasta oo lagu sameeyo Waxqabadka DFS ee sannadka 2018-ki
Sannadka saacadaha kooban ka harsan yihiin waxaa lagu xusuusan doonaa Galaangalkii DFS, Siyaasadaha Is-diidan, Khilaafka Golayaasha Qaranka iyo kuwa ay DFS iyo DG ku kala irdhoobeen. Qiimeyn kasta oo lagu sameeyo Waxqabadka DFS ee sannadka 2018-kii waxaa hubanti ah inay ku tallaabsatay Horumar iyo Dib-u-dhac, inkastoo uu Dib-u-dhacu saamayn ku yeeshay Hawlihii Golayaasha Qraanka iyo kuwa DG. DFS sidii Dowladihii ka horreeyey waxay caqabado ka haystaan dhanka Ammaanka, iyadoo dadweynuhu la daalla dhacayaan amni-xumi iyo Waddooyinka oo mararka qaarkood looga xanibo Madax dhoofaysa iyo Wafuudda Caalamiga ee boqashadda ku yimaada Somalia. DFS caqabadda dhanka Ammaanka ka sokow waxaa u soo labeeyey Dagaal-siyaasadeedka DG, kuwaasi oo iyagu isku bahaystay sidii ay DFS ugu dhigan lahaayeen Isbaaro dabri kara Dhaqdhaqaaqa Guud ee Golayaasha Qaranka. Mashaqo Siyaasadeed kale ayaa laga badbaaday, kadib, markii ay qaar ka mid ah Madaxda Golayaasha DF uu Khilaaf siyaasadeed soo kala dhex galay, kaasi oo dhowr isbuuc dib u dhigay Hawlihii Golaha Shacbiga Qraanka.
Sidoo kale, Khilaafka DF iyo DG ayaa u muuqda mid weli loo caal la’ yahay, waxaana muuqata in Hesjiis la’aanta labada dhinac sababayso inay xaalladu sii daba dheeraato, oo ay madaxa la sii gelayso sannadka cusub ee 2019-ka ee Tirsiga Miilaadiyadda./
Hoos ka Dhageyso Faallada oo Cod ah,waxaana soo jeedinaya Wariye Xasan Nasiib Maxamed